musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Sravana Sameeralu Serial XNUMXth Breaking News » Sei Palau akave wekutanga wekushanya mutungamiri mu2020?
Kuputsa Kufamba Nhau • tsika nemagariro • Hurumende Nhau • nhau • Sravana Sameeralu Serial XNUMXth Breaking News • Kutarisirwa • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Ndeupi rudzi rwe suntan lotion ndiyo yakanakisa kuchengetedza ganda rako kana uri pamhenderekedzo muHawaii, Florida kana Palau?
Iko kushandiswa kwe suntan lotion hakupe mushanyi tikiti yemahara yekuuraya matombo emakorari. Suntan lotion ine oxybenzone uye octinoxate, maviri makemikari akajairika anozivikanwa kukuvadza matombo ekorari,
Kuuraya matombo emakorari zvinoreva kuuraya iyo yekufambisa neyekushanya indasitiri, ichiteverwa nekuuraya hupfumi hwenyika diki sePalau.
Hurumende yePalau, nekudaro, inova nyika yekutanga uko kutengeswa kwezuva rakadzivirirwa zvakadaro zvave pamutemo, pasi peMutungamiri Tommy Remengesau. Akashanda semutungamiri wepfumbamwe wePalau kubvira 2013. Akamboshanda semutungamiri wechinomwe kubva muna 2001 kusvika muna 2009. Aive Seneta muPalau National Congress pakati pehutongi hwake huviri.
Palau inyika yakazvimiririra uye chitsuwa chezvitsuwa zvinopfuura mazana mashanu, chikamu cheMicronesia dunhu kumadokero kwePacific Ocean. Koror Island inogara kune raimbove guta guru, iro zvakare rakanzi Koror, uye iri nzvimbo yekutengeserana yezvitsuwa. Iyo huru Babeldaob ine guta razvino, Ngerulmud, pamwe nemakomo uye jecha mahombekombe kumahombekombe ayo ekumabvazuva. Kumusoro kwayo kuchamhembe, ekare basalt monoliths inozivikanwa seBadrulchau iri muminda ine huswa yakakomberedzwa nemichindwe.
"Tinofanira kurarama nekuremekedza nharaunda nekuti nharaunda ndiyo dendere rehupenyu," akadaro Mutungamiri wePalau Tommy Remengesau. "
Oxybenzone uye octinoxate inotora mwenje yeultraviolet, mwaranzi inokonzeresa kupisa kwezuva nekukuvara kweganda.
Makemikari ane huturu hwezuva anowanikwa zvine chepfu akawanikwa munzvimbo dzese dzinonetsa dzePalau uye mumatumbu ezvisikwa zvine mukurumbira zvePalau. Mutungamiri wePalau anoti: "Hatina basa nekuva nyika yekutanga kurambidza makemikari aya, uye tichaita chikamu chedu kuparadzira shoko."
Zvitoro zvinotengesa sunscreen nemakemikari iwayo zvinogona kubvisiswa faindi inosvika chiuru chemadhora, uye vashanyi vanopinda munyika havazobvumidzwa kuunza zvinodzivirira zuva.
Kunze kwekuchenesa makorari, iwo maviri makemikari akaratidzirwa kuumbiridza nekukuvadza iyo yayo DNA, pamwe nekuremadza uye kuuraya vechidiki makorari. Vakashambira vane ganda rakachena vanonetseka nezvekupiswa nezuva vachiri kushandisa reef-safe avo.
"Sevachengeti vezvishamiso zvepasirese zvine mukurumbira pasi rese, kusanganisira UNESCO World Heritage Site, ibasa redu kukurudzira kurapwa kwakanaka kwezviitiko izvi nezviuru zvevashanyi vanofamba kubva pasirese kuti vazvionere," mutemo unoverengwa.
Vazhinji vagari vemuPalau vakaona tsika dzinoparadza nharaunda nevashanyi vasina kudzidza kusanganisira kubviswa kwezvisikwa zvisingawanzo, kuisa mungozi kwekorari nemapini kana zvinosvibisa zvemakemikari, uye kusiya kwemarara epurasitiki.
Mumwe mutemo unovharawo makumi masere muzana yenzvimbo dzeupfumi munzvimbo inochengeterwa hove kumabasa ekuredza hove uye zvegungwa senge kuchera migwagwa uye kushark, kuisa chirango chehove yekutengesa pamusoro pezana remazana mazana mana emakiromita egungwa.
Hawaii uye Key West, Florida ichatevera Palau muna 2021.